Ederede Tyson Ndenye na Martech Zone |
Edemede site na Tyson Ndenye
Tyson Ndenye bụ Onye guzobere na onye isi nke Instapage, onye ndu na njikarịcha post-pịa. Ọ hiwere Instapage na 2012 mgbe ọ hụrụ ka arụmọrụ na ndị na-eto eto na-efu ego na mkpọsa mgbasa ozi na-adịghị mma. Kemgbe ahụ, ọhụụ ya bụ ịmepụta ụlọ ọrụ nke njikarịcha njikarịcha ngwaahịa na-ebuli nloghachi site na ịhazi mgbasa ozi.
Gini mere Odi Oso Ogwu di Olu? Etu esi anwale ma melite nke gi
Wednesday, May 15, 2019 Wednesday, May 15, 2019 Tyson Ndenye
Imirikiti saịtị na-efunahụ ihe dị ka ọkara nke ndị ọbịa n'ihi ọsọ ọsọ ibe ha. N'ezie, ọnụ ọgụgụ nkwụghachi elu nke ibe desktọọpụ desktọọpụ bụ 42%, ọnụọgụ nkwụghachi azụ nke ibe weebụ bụ 58%, na nkezi post-pịa ọdịda peeji ibiaghachi ọnụ sitere na 60 ruo 90%. Naghi onu ogugu site n’uzo obula, tumadi n’igoro ojiji ekwenti n’aga n’ihu na etolite ma ya esi ike karie ubochi iji dọta ma debe ndi ahia. Dị ka Google, ndị